Yusuf Warsame oo ku geeriyooday Sweden ka dib markii gurigii uu joogay lagu tuuray bambo gacmeed |
Yusuf Warsame oo ku geeriyooday Sweden ka dib markii gurigii uu joogay lagu tuuray bambo gacmeed
Alle ha u naxariistee Yuusuf Warsame oo ah wiil yar oo 8 jir ah ayaa geeriyooday ka dib markii gurigii uu booqashada ku joogay ee Sweden lagu tuuray bombo gacmeed.
Yuusuf Warsame, hooyadii, walaalkii iyo walaashii oo degan magaalada Birmingham ee wadanka Ingiriiska ayaa booqasho ugu tagay family ay qaraabo yihiin magaalada Gothenburg, halkaas oo uu ku geeriyooday Yuusuf bombo lagu tuuray gurigii ay deganaayeen, sidaa waxa yidhi Police-ka Sweden.
Markii bombo gacmeedka lagu soo tuuray guriga uu joogay Yuusuf Warsame waxa qolka la hurday hooyadii, walaalkii iyo walaashii oo ay soo gaadheen dhaawacyo yaryari, Yuusuf wxuu u geeriyooday dhaawicii ka soo gaadhay qaraxa markii loo sii waday dhakhtarka.
Police-ku waxay sheegeen in uu address-ka gurigaa uu deganaan jiray nin dad hore xabad ugu laayay magaaladaas, balse Police-ku waxay yidhaahdeen waxa aanu baadhi inuu xidhiidh la leeyahay bomb-kani ninkaa hore u deganaa guriga ee la xukumay iyo in kale.
Gabiley.net waxay ka tacsiyadaynaysaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Yuusuf Warsame.
Wixii ka soo kordha kala soco Gabiley.net